SAWIRO:-Taliyaha Booliska Soomaaliya oo gaaray Jabuuti - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Taliyaha Booliska Soomaaliya oo gaaray Jabuuti
SAWIRO:-Taliyaha Booliska Soomaaliya oo gaaray Jabuuti
Wafdi saraakiil ah oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa ay gaareen dalka Jabuuti halkaas oo siweyn loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga ayaa waxaa Jabuuti kusoo dhaweeyey Saraakiisha ugu sareeysa Ciidamada Booliska dalkaas,iyaga oo kulamo ka bilaabay halkaas.
U jeedada Wafdiga Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyees Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa lagu sheegay in uu halkaasi tababar ugu soo xiri doono ciidan boolis ah oo tababar ku qaatay dalka aanu walaalaha nahay ee Jabuuti.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Jabuuti ayaa waxaa uu kulamo la qaadan doonaa Madaxda dalkaas,isaga oo kala hadli doona Arrimo la xiriira tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliya.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Habeen 2-12-2019
Next articleSoomaaliland oo ka hadashay weerarkii Ceerigaabo
Golaha Wasaaradda Cusub ee Puntland oo la dhaariyay
Dhageyso:-Jubbaland oo si caro leh uga hadashay hadalkii Amb, Francisco Madeira
Taliyaha Ciidanka Xoogga oo gaaray Cabudwaaq kulamana ka bilaabay
Puntland oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay Hub iyo Gaadiid ay lahaayeen Daacish